စက်တပ် linear actuator နှင့် hနှင့်wheel ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် linear actuator နှင့် handwheel
စက်တပ် linear actuator နှင့် handwheel
AOX-L ကို စီးရီး စက်တပ် linear actuatသို့မဟုတ် နှင့် hနှင့်wheel ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ linear လုပ်ငန်းလည်ပတ် အဆို့ရှင် ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင် နှင့် တူသော usages.AOX-L ကို ကို စီးရီး စက်တပ် linear actuatသို့မဟုတ် နှင့် hနှင့်wheel drive အားဖြင့် 380V / 220V / 110VAC သို့မဟုတ် 24V / 110VDC ပါဝါ, သွင်းအားစု 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10VDC ထိန်းချုပ်မှု signal ကို, ရွေ့လျား အခင်အရှင် သို့ အဆိုပါ မှန်သော အနေအထား, နှင့် အောင်မြင်မှု သို့ auသို့matic ထိန်းချုပ်မှု, အဆိုပါ အများဆုံး output ကို ဘို့ce ဖြစ် 30000N.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tributသို့မဟုတ်s နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု
မော်တော်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အပူကာကွယ်တက်နှင့်အတူအတန်းအစားက F, +135 တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (+275 တစ်° F)
on-ချွတ်အမျိုးအစား: S2 - 15 မိနစ်မျှထက် ပို. 600 ကြိမ်နှုန်းတစ်နာရီ စတင်
signal တုံ့ပြန်ချက်: ပေါင်းစည်းအမှားအဆက်အသွယ်များ, ယင်းအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ပြီး အဆက်အသွယ်က, အဆို့ရှင်အဆက်အသွယ်ကိုဖွင့်
ခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ, တိကျ positioning ကို, ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်
1 ။ valve ဆက်သွယ်မှု
ကွဲပြားခြားနားသောမှတဆင့် bracket ကကွန်နက်ရှင်, AOX-L ကို handwheel နှင့်အတူစီးရီးစက်တပ် linear actuator များအတွက်သင့်လျော်သောနိုင်ပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောအဆို့ရှင်။ စွန်ခံအသုံးပြုခြင်း သံမဏိစကေးအကဲအမှူးသံမဏိ slider ကို။
2 ။ ဉာဏ်ကောင်းသော module တစ်ခု
AOX-L ကိုစီးရီးစက်တပ် အလွန်အမင်းဘက်ပေါင်းစုံ, အနိမ့်ပါဝါကို Microcontroller တွေနဲ့ Analog circuit ကို အသုံးပြု. handwheel နှင့်အတူ linear actuator All-သတ္တု plug-in ကို installation ကိုသုံးပြီးရောထွေး control panel ထဲက, ကထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင် အဆိုပါ actuator မော်တာအပူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ခွဲထုတ်အလွန်ဆော့ဖ်ဝဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် နဲ့ hardware Anti-jamming နဲ့ပါတ်သက်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
3 ။ installation
နှင့်ကိုက်ညီတပ်ဆင်အရွယ်အစား၏အောက်ဆုံး အဆို့ရှင် installation ကိုအရွယ်အစားမကိုက်ညီလျှင်အဆို့ရှင်စံချိန်စံညွှန်းများ, ထို့နောက်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (က)
2A ပွင့်လင်း / အနီးကပ်, SPDT, 250VAC 10A
auxiliary ကန့်သတ် switch ကို
သှေ့ခွောကျ အမှုန့်, Epoxy polyester မြင့်မား Anti-ချေး
internal-ထားရှိ အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပွင့်လင်း115âတစ်±5â / ပိတ်97âတစ်±5â
Declutching ယန္တရား, handwheel ခြင်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ရန်
space ကို အပူဓါတ်ပေးကိရိယာ
2 တစ်ဦး M18 * 1.5
အဆီ molyï¼ EP typeï¼
မက်စ် 90ï¼ RH အ
X ကို Y က Z ကို 10g, 0.2ï½ 34 Hz, 30 မိနစ်များ
အချိုးအစား ထိန်းချုပ်မှုယူနစ် (ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ 4-20mA, DC / 1-5V / 1-10V)
ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံခေါင်သီ / ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် (ဒေသခံထိန်းချုပ်မှုပွင့်လင်း / ရပ်တန့် / နီးကပ် optional ကို switch ကို, switch သည်)
ရေစိုခံ actuator (IP68,10M, 250HR)
နောက်ပြန် လျှပ်စစ်သံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဂီယာပေါင်းစည်းမော်တာ starter
လျှပ်စစ် လက်ရှိအနေအထားအာရုံခံကိရိယာ (output ကို 4-20mA, DC)
မြင့်သော အပူချိန်ခုခံ actuator (-10âï½ + 100â)
အနိမ့် အပူချိန်ခုခံ actuator (-40âï½ + 70â)
ကျနော်တို့ကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့များမှာ HVAC, Waterworks, ကမ်းလွန်, Pull & စက္ကူ, ဓာတု, များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု ရေနံဓာတု, ရေနံချက်စက်ရုံ, စွမ်းအင်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သတ္တုတွင်း, ဆေးဝါး, အစားအသောက် & Beverage, Shipbuilding, ပါဝါစက်ရုံနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။ AOX-L ကိုစီးရီးစက်တပ် handwheel နှင့်အတူ linear actuator အများဆုံးပေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်မှယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နည်းပညာသုတေသနနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေ၏ကြီးမားသောပမာဏနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။3တီထွင်မှုအပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်, မူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်။2utility ကိုမော်ဒယ် patents.We ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-L ကိုများအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံကိုထုတ်ဆောင်ရွက်မည် စီးရီး handwheel နှင့်အတူ linear actuator စက်တပ်။
မေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုနိုင် သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့သို့မဟုတ် comany အမည်လား?
ဖြေသေချာတာပေါ့။ သင့်ရဲ့လိုဂို စတစ်ကာဖြင့်သင့်ထုတ်ကုန်အပေါ်ပုံနှိပ်နိုငျသညျ။
မေး: နိုင်သလား သငျသညျငါ့ကို AOX-L ကိုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့ စီးရီး handwheel နှင့်အတူ linear actuator စက်တပ်?
A: ဟုတ်ကဲ့, သင်ပို့ကြည့်သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် ia အကြောင်းကိုငါ့ကိုမေးလ်ပို့နိုင်ပါသည် သငျသညျသူသည်သင်တို့ကိုမလိုအပ်သတင်းအချက်အလက် detal ။
Q: ကိုဝယ်စေချင် 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်း AOX-L ကို စီးရီး handwheel နှင့်အတူ linear actuator စက်တပ်, ဒါပေမယ့် firist ငါတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
hot Tags:: စက်တပ် linear actuator နှင့် handwheel, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်